Ankara Sivas YHT လိုင်းရှိလှေငြိမ်ပြProbleနာ! 60 ကီလိုမီတာရထားဖယ်ရှားခဲ့သည် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီAnkara Sivas YHT လိုင်းရှိလှေငြိမ်ပြProbleနာ! 60 ကီလိုမီတာရထားဖယ်ရှားခဲ့သည်
21 / 01 / 2020 06 တူရကီ, 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ykara လိုင်းလှေငြိမ်ပြproblemနာမိုင်အကွာအဝေးရထားလမ်းဖယ်ရှား ankara sivas
Ankara နှင့် Sivas ကိုဆက်သွယ်မည့် ၄၀၆ ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတွင်“ ballast” တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောပြtoနာကြောင့်ကီလိုမီတာ ၆၀ အပိုင်းတွင်တင်ထားသောသံလမ်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်မည့်ဝန်ကိုဖယ်ရှားရန်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းကိုလိုင်းတစ်လျှောက်ထားရှိခြင်းသည်ကျိုးပဲ့ခြင်း၊ အစွန်အဖျားကျခြင်း၊ နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၅ နှစ်တာကြာရှည်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်လှေငြိမ်ကိုအစားထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Haberturkထံမှ Olcay Aydilek ၏အစီရင်ခံစာအရ; TCDD ၏သတိပေးချက်အရကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီသည်ကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာအဝေးတွင်ရထားလမ်းများဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သူကလှေငြိမ်ကိုအစားထိုးစတင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြီးဆုံးပြီဟုဖော်ပြထားသည်။ အရင်းအမြစ်များအရကုန်ကျစရိတ် (TL ၁၀ သန်းဝန်းကျင်) ကိုကန်ထရိုက်တာမှပေးသည်။
ပိုမိုနီးကပ်စွာ Sivas-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလိုင်းကို၏အဆုံးတူရကီအတွက်အကြီးမားဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက်များထဲတွင်။ ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်စီမံကိန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည် ၄၀၆ ကီလိုမီတာလိုင်းတစ်လျှောက်တွင်သောင်းချီသောနေရာများတွင်အချိန်ပိုလုပ်နေကြသည်။
စီမံကိန်းပြီးသည်နှင့် Sivas နှင့် Ankara အကြား YHT နှင့်ခရီးသွားချိန်သည် ၂ နာရီအထိလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ဒါဟာ Istanbul နှင့် Sivas အကြား2နာရီဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်လိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်တင်ထားသော“ လှေငြိမ်” တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ TCDD စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များသည်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွင်ကီလိုမီတာ ၆၀ ရှည်သောinရိယာ၌ ballast ၌အိုမင်းခြင်း၏နည်းပညာပြofနာရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်တစ် ဦး လှေငြိမ်သည်အဘယ်နည်းနှင့်ပြandနာကဘာလဲ? သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်မည့်ဝန်ကိုဖယ်ရှားရန်စီစဉ်ထားသောလိုင်းတစ်လျှောက်ရှိသံလမ်းအောက်တွင်ကျောက်တုံးများကို“ Ballast” ဟုခေါ်သည်။ ထိုလှေငြိမ်သည် ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ ဒီinရိယာထဲမှာထည့်ထားတဲ့လှေငြိမ်သည်နေနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်“ အိုမင်းခြင်း” လက္ခဏာကိုပြသည်။ သူသည်ဝန်ကိုမထမ်းနိုင်တော့ဘဲမကြာမီဖြန့်ကျက်လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
TCDD စီမံခန့်ခွဲမှုကစီမံကိန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်သောကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီအားသတိပေးခဲ့သည်။ ကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာအဝေးရှိရထားများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ballast အစားထိုးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြီးဆုံးပြီဟုဖော်ပြထားသည်။ အရင်းအမြစ်များအရကုန်ကျစရိတ် (TL ၁၀ သန်းဟုဖော်ပြထားသည်) ကိုကန်ထရိုက်တာမှဝယ်ယူခဲ့သည်။
ရေဥတုလှေငြိမ်ချုံ့စက်ဝယ်ယူရေးနူးညံ့အပြီးသတ်ခဲ့သည် TCDD ခြောက်လရထားလမ်းလှေငြိမ်
အဆိုပါ 2015 နှစ်ပေါင်း 100 Alanya က Surface Coating မိုင်အကွာအဝေး, မိုင်အကွာအဝေး 35 ဟော့ကတ္တရာသုံးပစ်မှတ်ထဲမှာ
Ankara Sivas YHT လိုင်းပထမရထားလမ်းဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမီးရထားလမ်းနှင့်အတူလှေငြိမ်စိစစ်စက်များတွင်လှေငြိမ်၏ဖျက်သိမ်းရေး built ပါလိမ့်မည်
TCDD တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT အညီမျှလုံခြုံရေးပြဿနာ
Ankara Sivas အမြန်ရထားလမ်းပထမရထားလမ်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်း
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 25 2018 YHT တူရကီ-Sivas စီးရီးငါပထမဦးစွာရထားလိုင်း
Arslan, Ankara-Sivas YHT ၂၀၁၈ ၏ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် Ankara-Istanbul …
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Ankara-Eskişehirမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်း KM: သံမဏိ 460 + 800 - 461 + 700 …
Ankara Sivas အမြန်နှုန်းလိုင်းဖွင့်ပွဲနေ့
Ankara Sivas အမြန်ရထားဘူတာ
Ankara Sivas YHT လိုင်းရှိလှေငြိမ်ပြProbleနာ